26 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အကျော်ကြားဆုံးကျောက်များနှင့်စကျင်ကျောက် | Flodeal Inc မှ.
စကျင်ကျောက်နှင့်ကျောက်အလွန်ခေတ်မီဗိသုကာအတွက်ပစ္စည်းများအသုံးပြုကြသည်. ဤရွေ့ကားပစ္စည်းများအများအားဖြင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်အတွက်အသုံးပြုကြသည်, အခင်း, အထိမ်းအမှတ်, မြို့ရိုးကိုဝတ်, Pavers စသည်တို့ကို. စာရင်းဖြစ်ပါတယ်အောက်ပါ 26 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အကျော်ကြားဆုံးကျောက်များနှင့်စကျင်ကျောက်. ဤစာရင်းတွင်အိန္ဒိယမူလအစနှင့်အတူသာပစ္စည်းများပါဝင်သည်:
ဒါကအားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရေပမ်းအစားဆုံးကျောက်တစျဦးဖွစျသညျ. အဆိုပါ Absolute က Black မီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့် Memory အောင်အဘို့အများအားဖြင့်အသုံးပြုသည်. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်အထွေထွေဖောက်သည်အမှောင်ဆုံး Absolute က Black ကျောက်ခေါ်ပရီမီယံအနက်ရောင်ကျောက်ကြိုက်တတ်တဲ့. ဤသည်အလွန်ချောအစေ့နှင့်အတူတစ်ဦးကိုရောင်းမှောင်မိုက်အရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနိုင်ပါအမှောင်ဆုံးကျောက်ဖြစ်ပါသည်.
Black ကက Galaxy လည်းအမေရိကန်အတွက်လူကြိုက်များကျောက်ဖြစ်ပါသည်. သင်ဤမှောင်မိုက်အရောင်, ငွေနှင့်ရွှေညိုကျောက်နှင့်အတူမီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့်လှပသောမြို့ရိုးကိုဝတ်စေနိုင်သည်. အရွယ်အစားယေဘုယျအားဖြင့်လူပိုနှစ်သက် Black ကက Galaxy ကျောက် အကျယ် 6ft နှင့်တက်က x အလျား 9ft ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အထက်. ဤသည်ကျောက်အဖြစ်ကောင်းစွာအခင်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်. Black ကက Galaxy ကျောက်၏ tiles ကြမ်းပြင်အောင်အတွက်အလွန်လူကြိုက်များ, ရေချိုးခန်း, မီးဖိုချောင်ထိပ်.
အဆိုပါ အဖြူ Alaskan အမေရိကန်ဈေးကွက်တွင်အသုံးပြုမီးဖိုချောင်ကောင်တာများများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအဖြူရောင်ကျောက်တစျဦးဖွစျသညျ. ဒါဟာအနက်ရောင်နှင့်အညိုရောင်အစက်အပြောက်တွေနဲ့လှပတဲ့အဖြူရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်မြို့ရိုးကိုဝတ်တွင်လည်းအသုံးပြုသည်. ဤသည်ကျောက်ဘရာဇီး Alaska White ကကျောက်ဆင်တူသည်, အိန္ဒိယ Alaska White ကကျောက်များ၏အစွမ်းသတ္တိ, ခိုင်မာသောဘရာဇီးရှိသော counterpart ထက် သာ. ကောင်း၏.
အပြာရောင်သဲခုံကျောက် (အပြာ Celeste)
အပြာရောင်ခုံသို့မဟုတ် Azul Celeste ကျောက်သစ်တစ်ခုကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ကျောက်အညိုရောင်ရှိပါတယ်, အညိုရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်ခုံအမျိုးအစားပုံစံနှင့်အတူအစိမ်းရောင်နဲ့အပြာရောင်နောက်ခံ. ဤသည်ကျောက်အများအားဖြင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်အသုံးပြုသည်. ဤသည်အလွန်လှပသောကျောက်သည်နှင့်ကသဲကန္တာရသဲခုံတူ.
အဖြူရောင်က Galaxy ကျောက်အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါရှိအမြဲစိမ်းလူကြိုက်များကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ကျောက်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်အသုံးပြုသည်, ရေချိုးခန်းဝေါလ်နှင့်အခင်း. ဤသည်ကျောက်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ရေပန်းစားသည်. ဒါကအိန္ဒိယကနေပရီမီယံကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒီကျောက်၏အုပ်ကြွပ်အခင်းများနှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်ဘို့အသုံးပြုကြသည်.
ဒါဟာအညိုရောင်ကျောက်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးအိန္ဒိယကျောက်တစျဦးဖွစျသညျ. ဒါဟာ Flame အတွက်ရရှိနိုင်, သားရေ, နှင့်ပွတ်ပြီး. ဤသည်မှာအများအားဖြင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်အသုံးပြုသည်, အခင်းများနှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်. ဤသည်ကျောက်ညိုပန်းပွင့်နှင့်အတူမှောင်မိုက် tan နောက်ခံရှိပါတယ်. အဆိုပါ Tan ကဘရောင်းကကျောက်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနှင့် CIS နိုင်ငံများတွင်လည်းအလွန်ရေပန်းစားသည်. ဤသည်ကိုလည်းတောင်ပိုင်းအိန္ဒိယကျောက်ဖြစ်ပါသည်.
သံမဏိ Grey ကကျောက်လည်းငွေပုလဲကျောက်အဖြစ်လူသိများသည်. ဤသည်ကျောက်ကြီးတွေဧရိယာအခင်းများနှင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာတစ်ခုစံပြရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်. ဒီကျောက်၏အရောင်သည်အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်သွန်းပန်းပွင့်ပုံစံကိုနှင့်အတူအများအားဖြင့်မီးခိုးရောင်ဖြစ်ပါသည်. အရောင်ငွေနှင့်မီးခိုးရောင်အကြားဖြစ်ပါသည်. ပွတ်ငွေပုလဲအလွန်ကောင်းသောနှင့်ဆွဲဆောင်မှုကြည့်. ဤသည်ကျောက်ကိုလည်းမီးလျှံများနှင့်သားရေပြီးလာ.
ဒါကအိန္ဒိယကနေကျောက်ရောင်စုံအလွန်နိမ့်အပြောင်းအလဲအညိုဖြစ်ပါသည်. ဤသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိမီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်အဘို့အများအားဖြင့်အသုံးပြုသည်. ကော်ဖီအညိုရောင်ကျောက်အရောင်ကော်ဖီစေ့နှင့်တူ၏. ဤသည်ကျောက်လည်းကနေဒါအရှိဆုံးဆည်းကပ်-ပြီးနောက်ကျောက်အရောင်များတဦးဖြစ်သကဲ့သို့ကောင်းစွာ.
အဆိုပါ Black ကပုလဲကျောက်ကိုလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနာမည်ကြီးအနက်ရောင်နှင့်မီးခိုးရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ကျောက်အများအားဖြင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်. အတော်များများကအိမ်ပိုင်ရှင်စျေးကြီး Absolute က Black ကျောက်ကျော်အနက်ရောင်ပုလဲကျောက်ကြိုက်တတ်တဲ့. သင်တို့သည်လည်းအခင်း၌ဤကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်, Backsplash နှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်အုပ်ကြွပ်.
ဤသည်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အလှဆုံးနှင့်လူကြိုက်များအဖြူရောင်ကျောက်တစျဦးဖွစျသညျ. ဤသည်ကျောက်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်များအတွက်အလွန်လူကြိုက်များရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်, ကြမ်းခင်းများနှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်. အရောင်တစ် milky အဖြူနှင့်မီးခိုးရောင်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ကျောက်အများအပြားအကြီးစားအခင်းနှင့်ခြုံထားတဲ့စီမံကိန်းများတွင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး. ဒီပစ္စည်းကျောက်မိုင်းထက်ပိုပြီးအဘို့အပိတ်ခံခဲ့ရကတည်းကဒါဟာကျောက်ဖြစ်ကောင်းအများဆုံးကျောက်အကြောင်းကိုစကားပြောဖြစ်ပါတယ်5နှစ်ပေါင်း, ဒါပေမယ့်လူကြိုက်များမဆုံးရှုံးခဲ့ပါ.
ကိုလိုနီခေတ် Cream ကျောက်
ဒါကရွှေအညိုရောင်နှင့်အနက်ရောင်ညိုနဲ့မုန့်နှင့်ဆင်စွယ်အခြေစိုက်စခန်းကျောက်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါကိုလိုနီမုန့်ကျောက်လည်းအိုင်ဗရီကို့စ် Cream အဖြစ်လူသိများသည်, ရောမဖြူ, နှင့် Astoria Cream ကျောက်. ဒီလူကြိုက်များကျောက်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောကုန်သွယ်ရေးအမည်များရှိပါတယ်. ဤသည်မှာအများအားဖြင့်မီးဖိုချောင် Worktops အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်, ဒီအလင်းအရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကဒါပေမယ့်လည်းအခင်းအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်. သငျသညျရေချိုးခန်းအတွင်းကိုလိုနီ Cream ကျောက်၏အုပ်ကြွပ်ကိုသုံးနိုင်သည်, အဖြစ်ကောင်းစွာမြို့ရိုးကိုကြွပ်.
Monte Christos ကျောက်
Monte Christos ကျောက်အိန္ဒိယကနေတစ်ဦးအလွန်ပရီမီယံသီးသန့်နှင့်ထူးခြားဆန်းပြားကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာပျထှေးသောအပြာနှင့်မီးခိုးရောင် strips တွေနှင့်အတူမီးခိုးရောင် / အပြာနောက်ခံရှိပါတယ်. ဤသည် worktops နှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်ဘို့အလွန်လှပသောကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါကအိန္ဒိယကနေစျေးအကြီးဆုံးကျောက်တစျဦးဖွစျသညျ. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပြည်သူ့အတွက်ပြားဝယ်ယူ Monte Cristo ကျောက် မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်များအတွက်.
မွန်းအဖြူရောင်အိန္ဒိယကနေအဖြူကျောက်ဖြစ်ပါသည်, ဒီကျောက်မီးဖိုချောင် Worktops အဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်အလွန်ရေပန်းစားသည်. အဆိုပါမွန်းအဖြူအညို garnets နှင့်အတူအဖြူနှင့်မီးခိုးရောင်နောက်ခံရှိပါတယ်. ဤရွေ့ကား garnets အဖြူရောင်နောက်ခံနှင့်အတူလှပသောကြည့်ရှု. သငျသညျအဖြူဝန်ကြီးအဖွဲ့နှင့်အတူလအဖြူရောင်ကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်, အညိုရောင်ဝန်ကြီးအဖွဲ့နှင့်အခြားမှောင်သွန်းပုံး. သင်တို့သည်လည်းအခင်းထဲမှာသုံးနိုငျ.
လာဗင်ဒါအပြာရောင်အဆင်းလှသောအပြာကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအညိုရောင်အရောင်၏ဒဏ်ငွေ garnets အတူအပြာအခြေစိုက်စခန်းရှိပါတယ်. ဤသည်ကျောက်ကိုလည်းပစ္စည်းများ၏ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာသေတ္တာများအမျိုးအစားပုံစံရှိပါတယ်. ဤရွေ့ကား boxes တွေကိုဒီကျောက်အလွန်ဇိမ်ခံကြည့်စေသည်ဖြစ်သောနယ်စပ်ရှိမဲမှောင်များမှာ. ဒါကစီမံကိန်းအတွက်ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်. အတော်များများကစီမံကိန်းများကိုဒီပစ္စည်းလိုအပ်ချက် flooring ဖြစ်ပါတယ်သုံး. အဆိုပါလာဗင်ဒါအပြာရောင်ကျောက်လည်းမီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့် worktops အောင်များအတွက်အလွန်လူကြိုက်များကျောက်ဖြစ်ပါသည်. လာဗင်ဒါအပြာကျောက်၏ Backsplash အုပ်ကြွပ်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါ.
အဆိုပါအိုင်ဗရီအညိုရောင်ကျောက်လူကြိုက်အများဆုံးကျောက်တစျဦးဖွစျသညျ. ဤသည်ကျောက်ဆင်စွယ်ရှိပါတယ်, အညိုရောင်သွေးပြန်ကြောနှင့်အတူမုန့်နောက်ခံ. ဒီကျောက်များ၏ဆင်စွယ်အခြေစိုက်စခန်းလည်းပစ္စည်း၏သဘောသဘာဝအတွက်ပန်းရောင်သေံရှိပါတယ်. ဤသည်သွန်းခင်း၌ဖြစ်စေမီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်အတွက်ဖြစ်စေလှပသောကြည့်.
Viscount White ကကျောက်
Viscon အဖြူရောင်မှောင်မိုက်အနက်ရောင်လိုင်းများနှင့်အတူလှပသောအဖြူရောင်ကျောက်နဲ့မိုးအုံ့ပုံစံဖြစ်ပါသည်. viscount အဖြူရောင်ကျောက်၏အခြားရွေးချယ်စရာနာမကိုအမှီငွေတိမ်တိုက်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါပစ္စည်းကိုအနက်ရောင်နှင့်မီးခိုးရောင်တိမ်ထူပုံစံနှင့်အတူအဖြူရောင်နောက်ခံရှိပါတယ်. ဤသည်မြင့်မားသောအပြောင်းအလဲကျောက်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်, တစ်ခုတည်းစာရေးအလားတူပစ္စည်းထားရှိရေး. ဤသည်ကျောက်ကျယ်ကျယ်အခင်းများနှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်. Viscount အဖြူရောင်ကျောက်၏ကောင်တာများနှင့် worktops အံ့သြဖွယ်ရှိပါတယ်, သူတို့ကမီးဖိုချောင်ထဲမှာတိမ်ကဲ့သို့ပေါ်လာ.
မြစ်အဖြူတစ်ကြက်သရေအဖြူရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပေမယ့်လည်းဥရောပတိုက်တွင်သာအလွန်လူကြိုက်များကျောက်ဖြစ်ပါသည်, အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ, နှင့်မြောက်ပိုင်းအာဖရိက. ဤသည်ကျောက်ပုံစံအတွက်မြစ် type ကိုသွေးပြန်ကြောနှင့်အတူတောက်ပသောအဖြူရောင်နောက်ခံရှိပါတယ်. အဆိုပါပုံစံနှင့်အရောင်ကဒီကျောက်ခင်းခြင်းနှင့်ကောင်တာများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အလွန်လူကြိုက်များရွေးချယ်မှုကိုလုပ်.
ကန္တာရဘရောင်းကျောက်အနက်ရောင်နှင့်အလင်းအညိုပန်းပွင့်နှင့်အတူမှောင်မိုက်အညိုရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ကျောက်ဟာအလွန်အားကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပြီးမီးဖိုချောင်ကောင်တာအောင်များအတွက်အလွန်ကောင်းသော, worktops, အခင်း, backsplash အုပ်ကြွပ်. ဒါကမြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယကျောက်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ Flamed ချောသဲကန္တာရအညိုရောင်ကျောက် Poolside pavers အသုံးပြုမှုရှိပါတယ်, မြို့ရိုးကိုဝတ်. ဒါကအနိမ့်အပြောင်းအလဲကျောက်သည်နှင့်ကြီးမားသောအခင်းများနှင့်ဝတ်စီမံကိန်းများအတွက်အလွန်ကောင်းသော. ဒီကျောက်၏အခြားအမည်များအပူပိုင်းဒေသဘရောင်းနှင့်အညိုရောင်အရွက်ဖြစ်ပါတယ်.
Imperial White ကကျောက်
အဆိုပါမှာ Imperial White ကကျောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ဥရောပထဲမှာလူကြိုက်များကျောက်ဖြစ်သည့်အိန္ဒိယကနေတစ်ဦးအလွန်ပရီမီယံအဖြူရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ကျောက်အလွန်လှပ. ဒါဟာမီးခိုးရောင်နဲ့အနက်ရောင်အရောင်၏ပါးလွှာသောသွေးပြန်ကြောနှင့်အတူအဖြူရောင်နောက်ခံရှိပါတယ်. အဖြူ strips တွေကဒီကျောက်ပိုပြီးလှပစေသည်ဖြစ်သောမှာ Imperial White ကကျောက်လည်းရှိပါတယ်. သငျသညျအသေးပြားအတွက်မှာ Imperial White ကကျောက်ဝယ်နိုင်, မီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့်ကြမ်းခင်းအောင်ဘို့ကြီးတွေပြား.
Black ကသစ်တောကျောက်, Silver, Paradiso, နှင့်က Pretoria က Black, အားလုံးအတူတူပင်ပစ္စည်းကွဲပြားခြားနားသောကုန်သွယ်ရေးနာမကိုအမှီများမှာ. ဤသည်ငွေနှင့်အဖြူသွေးပြန်ကြောနှင့်အတူမှောင်မိုက်အနက်ရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဤရွေ့ကားသွေးပြန်ကြောတခါတရံသစ်တောအစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ဆင်တူ. ဤသည်ကျောက်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့်အခန်းတွင်းမြို့ရိုးကိုဝတ်အောင်များအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအသုံးပြုမှုအမျိုးမျိုး၌ဤကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်.
အဆိုပါ Fantasy ဘရောင်းစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းသို့မဟုတ် စိတ်ကူးယဉ်ဘရောင်းကျောက် ဒါမှမဟုတ်တချို့စိတ်ကူးယဉ်ဘရောင်း Quartzite ကိုမဆိုသံသယမရှိဘဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကောင်တာများနှင့် worktops များအတွက်ပါတဲ့လူသုံးအများဆုံးအရောင်များတဦးကပြောပါတယ်. ဤသည်ပစ္စည်းထိုကဲ့သို့သောမြို့ရိုးကိုဝတ်များနှင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအဖြစ်အသုံးပြုမှုအမျိုးမျိုးများအတွက်အလွန်ကျော်ကြား. သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာအခင်း၌ဤကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်. ဤသည်ပစ္စည်းကွဲပြားခြားနားသောအမေရိကန်မြို့ကြီးများနှင့်ပြည်နယ်များအတွက်ကျနော်တို့မှာအများကြီးရေပန်းစားသည်. ဒီစကျင်ကျောက်၏အဓိကစားသုံးမှုနယူးဂျာစီ၌တည်ရှိ၏, ဟူစတန်, ဖလော်ရီဒါ, နယူးယောက်စသည်တို့ကို. ဤလှပသောအညိုရောင်စကျင်ကျောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ သာ. သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းလူကြိုက်အများဆုံးပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်.
ဝိုး! ဒီစကျင်ကျောက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကြည့်ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးစကားလုံးဖြစ်မည်အကြောင်း. လူအတော်များများဟာသဘာဝအရာသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကြောင့်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီတကယ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းကြသေး. မိုးသစ်တောတွေဘရောင်းလူသားတို့အားမည်သည့်သံသယသဘောသဘာဝရဲ့ကြီးမြတ်သောဆုကြေးဇူးမပါဘဲဖြစ်ပါသည်. ဤသည်အလွန်လှပသောစကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်လူကြိုက်များသောစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းအညိုရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်ကိုသွန်းစီသည်အခြားဆုံမှတ်ထားတဲ့ခိုင်မာတဲ့အညိုရောင်သွေးပြန်ကြောနှင့်အတူအညိုရောင်အခြေအရောင်ရှိပါတယ်. သင်ကမုတ်သုံသစ်တောဘရောင်းစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းနှင့်အတူအံ့သြစရာမြို့ရိုးကိုဝတ်စေနိုင်သည်.
မိုးသစ်တောစိမ်းလန်းအဆိုပါမိုးသစ်တောဘရောင်းစကျင်ကျောက်တွေနဲ့ကျောက်တုံးကြီးများဖြစ်ပါတယ်. ဤသည်ကိုလည်းအလွန်လှပသောစကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်စကျင်ကျောက်အညိုရောင်တစ်ဦးကဲ့သို့တူညီသောဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်. သငျသညျမွို့ရိုးကိုဝတ်အတိုင်းမုတ်သုံသစ်တောစိမ်းလန်းစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းကိုသုံးနိုင်သည်, ရေချိုးခန်းအုပ်ကြွပ်, နှင့် backsplash အုပ်ကြွပ်. အတော်များများကအိမ်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ကောင်းစွာမီးဖိုချောင်ကောင်တာများအဖြစ်ဤစကျင်ကျောက်သုံးစွဲဖို့ကိုချစ်. ဤသည်အလွန်ပျော့ပျောင်းသောစကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. မိုးသစ်တောတွေစိမ်းလန်းစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းပုံစံအတွက်ခိုင်မာတဲ့အညိုသွေးပြန်ကြောနှင့်အတူအစိမ်းရောင်အခြေစိုက်စခန်းရှိပါတယ်. ဤသည်စကျင်ကျောက်သိပ်သဘာဝကအစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်, သင်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလွန်သာယာသောစေသည်ရုံးထဲမှာသုံးနိုငျ. ဒါဟာသစ်တောနဲ့တူပုံရသည်.
မာကျူရီက Black စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း
မာကျူရီက Black စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းတစ်ဦးအလွန်အသစ်သောစကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်စကျင်ကျောက်ကိုအမေရိကန်ဈေးကွက်တွင်လူကြိုက်များ ganing ဖြစ်ပါတယ်. ဤသည်စကျင်ကျောက်အလွန်ခဲယဉ်းနှင့်ခိုင်ခံ့သောဖြစ်ပါသည်. တကယ်တော့, က Fantasy ဘရောင်းနဲ့ဆင်တူတဲ့သတ္တိလည်းရှိတယ်. ဒီစကျင်ကျောက်၏အရောင်အဖြူငွေနှင့်မီးခိုးရောင်တိမ်ထူပုံစံနှင့်အတူမှောင်မိုက်အနက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်. ပြဒါးအနက်ရောင်စကျင်ကျောက်များပြားနှင့်အုပ်ကြွပ်မြို့ရိုးကိုဝတ်များနှင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်အလွန်ကောင်းသောများမှာ.
မြစ်အပြာရောင်စကျင်ကျောက်အလွန်အသစ်သောစကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါမြစ်အပြာရောင်စကျင်ကျောက်မာကျူရီ Black နဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဘရောင်းစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းဆင်တူဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်. ဒါဟာပုံစံတချို့အညိုရောင်နှင့်အပြာရောင်သွေးပြန်ကြောနှင့်အတူအပြာမီးခိုးရောင်အဖြူရောင်နောက်ခံရှိပါတယ်. မြစ်အပြာရောင် Fantasy ဘရောင်းသို့မဟုတ် White Fantasy မှအလားတူပုံစံနှင့်အတူတစ်မိုးအုံ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာရှိပါတယ်. ဒါဟာအလွန်မြို့ရိုးကိုဝတ်အတွက်အသုံးပြုသည်, အခင်း, နှင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများ. ဤအရာသည်အလွန်ခဲယဉ်းစကျင်ကျောက်သည်နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ချောကြာ.
Scorpio စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းလှပသောအညိုရောင်နဲ့ခရမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအခင်းများနှင့်မီးဖိုချောင် worktops ၌ဤစကျင်ကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်. ဒါဟာအဖြူနှင့်အတူအညိုရောင်နဲ့ခရမ်းရောင်နောက်ခံရှိပါတယ်, အညိုေရာင်ရင့်, အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်တိမ်ထူပုံစံ. ဤသည်စကျင်ကျောက်တဲ့အိန္ဒိယမြောက်ဘက်စကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်အလွန်ရေပန်းစားစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းဖြစ်ပါသည်.
အများအပြားအသစ်သောပစ္စည်းများစာရင်းကိုအပေါ်ရှိပါတယ်နှင့်ဤပစ္စည်းများကို၏ကုန်သွယ်ရေးနာမညျအကွောငျးရှုပ်ထွေးမှုများရှိစေခြင်းငှါ. သို့သျောလညျး, သငျသညျအရောင်အတည်ပြုရန်ဤ website တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စကျင်ကျောက်နှင့်ကျောက်အပိုင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကုန်သွယ်မှုအမည်ဖြင့်ကိုက်ညီနိုင်ပါတယ်. ထို့အပွငျ, the list could have been longer but we tried to keep it small. အခြားအလည်းရှိပါတယ် စကငျြကြောကျ နှင့် နှမျးဖတျကြောကျ which are popular in the United States of America. ကျနော်တို့သီးခြားတိုင်းပြည်အတွင်းလူကြိုက်အများဆုံးပစ္စည်းများဖြစ်သောအထဲကရှာတွေ့မှဧည့်သည်များ၏ဆန်းစစ်ရာတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြ. ကျနော်တို့ကဒီစီးရီးမှာပိုတိုင်းပြည်-တိကျတဲ့စာရင်းရောက်စေဖို့စီစဉ်နေပါတယ်.
ဤရွေ့ကားပစ္စည်းများအမေရိကန်ဈေးကွက်အတွက်အလွန်ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းကိုရရှိခဲ့သည်ပါပြီ. အိန္ဒိယပစ္စည်းများအလွန်အားကောင်းတဲ့နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်မြဲများမှာ. နောက်ဆုံးရအလိုအလျောက်စက်တိကျဘို့ဤပစ္စည်းကိုဖြတ် polishing. သငျသညျအုပ်ကြွပ်ရှေးခယျြနိုငျ, သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အဘို့ကောင်တာများသို့မဟုတ်ပြား.